नेपालदृष्टि । धर्मराज गाउँका धनीमानी व्यक्ति थिए । उनको ठुलो घर थियो । घरमुनि मिलेका खेतका गराहरू थिए । घर, खेतबारी सबैको रेखदेख इमान्दार पन्नाले गर्थ्यो । त्यसैले उसले मालिक मालिक्नीबाट भरपूर माया पाएको थियो ।
पन्नाको बोली सुनेर राती गाईले बाँ गरी कराएर आँसु झार्दै भनी –“पन्ना, तिमीलाई हेपेर बाली खाएको होइन नि । साँचो कुरा त यो धान खाएको देखेर तिमी यहाँ आउँछौ अनि मनको दुःख पोखौँला भनेर मात्र हो ।”
पन्नाले कुखुरीतिर हेर्दै भन्यो–“कुखुरी तिमी किन लुकेकी रु फेरि आँखामा आँसु पनि छ स्यालको डरले त होइन ?”
कुखुरीको कुरा सुनेर पन्ना झनै उदास भयो । उसलाई मान्छेसँग नै घृणा लाग्यो । पन्नाले अब के गर्ने कसो गर्ने सोच्नै सकेन । त्यत्तिकैमा पन्नाको आँखा पुनःअपरिचित मान्छेसँग हिँडेकी काली बाख्रीमा पर्यो । कुकुर दौडदै काली बाख्री नजिक भएर भन्यो –“बाख्री दिदी । तिमीलाई अन्तै बेचिदिएकी क्या हो ? यो मान्छे त तिम्रो मालिक होइन नि ।”
पन्नालाई पाङ्ग्रेको कुराको कुरामा पटक्कै विश्वास लागेन । उसले गाई–गोरु, कुखुरा, बाख्रीको कुरा सम्झेर आँसु झार्दै बगरमा नै बस्यो । पाङ्ग्रे पनि उसलाई सम्झाउँदै त्यही बस्यो । केही समयपछि धर्मराज साहू हस्याङफस्याङ गर्दै आएको देखेर पाङ्ग्रे खुसी भयो । धर्मराज साहूले पन्नालाई यताउता छामछाम छुमछुम गदै भने–“तैँले त हाम्रो सातो नै खाइस् नि बाबै । कतै पाङ्ग्रेसँग त झगडा परेन ? हेर है पाङग्रे । पन्नालाई छोइस मात्र भने तेरो हाडखोर बाँकिरहँदैन । पन्नालाई केही भयो भने हामी त टुहुरो नै हुन्छौँ । तेरी मालिक्नी तँलाई खोज्दै कहाँ–कहाँ पुगिन् होला कुन्नि ?” भन्दै पन्नालाई बोकर अगाडि लागे ।
शिक्षास् विविधताले भरिएको यो संसारमा सबैलाई एउटै आँखाले हेर्नु उचित हुँदैन ।
१६ औं अनसन बस्ने डा.केसीको चेतावानी